Kupisa uye hunyoro bhasikoro bvunzo - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Kupisa uye humidity cycling bvunzo
Kupisa uye humidity cycling bvunzo inoshandiswa kuyedza uye kuona ma parameter uye mashandiro ezvigadzirwa kana zvigadzirwa kuburikidza neshanduko yetembiricha uye mwando senge iri pasi pekupisa kwakanyanya uye hunyoro kana yakadzika tembiricha uye mwando.
Shanduko dzezvakatipoteredza muzvinhu zvakaita senge tembiricha uye hunyoro zvine simba zvinokanganisa zvinhu uye chigadzirwa chigadzirwa Isu tinofanotungamira bvunzo iyi nekunyudza zvigadzirwa kana zvishongedzo munzvimbo yekugadzira, tichifumura zvigadzirwa kune yakanyanyisa kupisa tembiricha, zvishoma nezvishoma tichideredza kusvika pasi tembiricha, uyezve tichidzokera kune kwakanyanya kupisa. Kutenderera uku kunogona kudzokororwa mune yekuvimbika kuyedzwa kana vatengi zvinodiwa.
Jera enderera nemuyedzo uyu pazasi zvigadzirwa
-FTTH Fiber optic inodonha tambo
-Insulation kuboora zvinobatanidza （IPC）
-FTTH inodonha tambo inosungisa
-Aerial inosungisa kana kugadzirisa inotsigira
-ABS waya kambo
Chiyero chakajairwa chematanho chiri kureva IEC 60794-4-22, EN-50483: 4, NFC-33-020, NFC-33-040.
Isu tinotengesa zvigadzirwa kune dzinopfuura makumi mana nyika pasi, dzimwe nyika dzine yakanyanya kukwirira kana yakadzika tembiricha, sezvakaita Kuwait neRussia. Zvakare dzimwe nyika dzine kunaya kunoramba kuripo uye kwakanyanya mwando senge Philippines. Tinofanira kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinogona kuiswa mumamiriro ekunze akasiyana uye bvunzo iyi inogona kuve yakanaka bvunzo yezvigadzirwa 'kuita.
Kamuri yekuyedza inotevedzera mamiriro ekunze akasiyana, tembiricha inogadziriswa yemidziyo iri + 70 ℃ ~ -40 ℃ uye hunyoro huwandu i0% ~ 100%, iyo inovhara nharaunda dzakaomarara pasirese. Isuwo tinokwanisa kudzora mwero wetembiricha kana mwando kukwira uye kudonha. Zvinodiwa bvunzo yetembiricha kana hunyoro zvinogona kugadzirwazve kuti zvidzivirire kukanganisa kwevanhu uye kuve nechokwadi chechokwadi nekurongeka kwekuyedza.
Isu tinoita bvunzo iyi pane zvigadzirwa zvitsva tisati tatanga, zvakare neyemazuva ese kudzora mhando.